Fifidianana filoham-pirenena amerikanina 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2019 8:49 GMT
Tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny masoivohom-baovao manerantany Reuters , nanokatra tranonkala Voices without Votes ny Global Voices mba hanasongadinana ny resadresaka amin'ny bilaogy tsy Amerikana sy ireo fampahalalam-baovaon'olon-tsotra, niaraka tamin'ny fanasongadinana ny faritra hanaovan'ny Global Voices fitantarana: Afrika, Azia, Eoropa, Amerika Atsimo ary ny Afovoany Atsinanana.
Ny Voices without Votes dia miompana amin'ny fanoratana ôrizinaly izay mamintina sy mandika teny ireo bilaogy eran-tany SY miaraka amin'ny famoaham-baovao isan'andro notsongaina avy amin'ny lahatsoratra tao amin'ny tranonkala manerana izao tontolo izao izay manome fomba fijery vahiny mampisaintsaina.
Inona ary ny azonao atao?
Tsidiho ary araho ny rohy mankany amin'ny tranonkala! Raha tsy Amerikana ianao, na monina any ivelan'i Etazonia dia manorata lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao manokana miaraka amin'ny eritreritrao momba ny fifidianana filoham-pirenena na izay lafiny momba ny politika Amerikana araka ny fahitan'ny firenenao azy ary mandefasa rohy aty aminay .